Isiqingatha se-Moon Bay Hideaway – imizuzu eyi-1 ukuya kwi-Foreshore - I-Airbnb
Isiqingatha se-Moon Bay Hideaway – imizuzu eyi-1 ukuya kwi-Foreshore
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOcean Edge Holiday Rentals: Rebecca
UOcean Edge Holiday Rentals: Rebecca yi-Superhost
Ukuqhayisa ngeembono ezizolileyo, le ndawo yokuhlala inemigangatho emibini yangoku eSorrento Terrace yongeza umbono owonwabisayo, kunye nedesika enkulu egobileyo yokonwabisa ejikeleza ikhaya. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye ukonwabele i-bay vista entle, kunye nokuhamba ngomzuzu omnye kuphela ukuya elunxwemeni! Ijikelezwe ziigadi ezihonjisiweyo, kunye neendawo zangaphakathi ezithembisayo ezicocekileyo, le ndawo inendawo ekhululekileyo ehambelana nendawo esecaleni lolwandle. Yonwabele i-alfresco ehlala ngaselwandle...
I-Covid-19 yembuyekezo eNxulumene nokuHamba: Ukuba izithintelo zokuhamba zikarhulumente waseOstreliya zikhona ngexesha lokubhukisha kwakho, thina (i-Ocean Edge) njengenkampani sibuyisela zonke iimali ezihlawulwe kuthi ngokupheleleyo, thabatha UKUYA kwi-5% yomrhumo wokulungisa intlawulo. , njengoko oko kungaphandle kolawulo lwethu.
Ukuhlala ngaselwandle akubi lula! Umgama nje wokujula elunxwemeni kwiNtloko enoxolo ye-Indented, eli khaya linesitayile libekwe kwindawo ezolileyo yenkundla, lenzela indawo enkulu yokubaleka.
Le ndawo incinci yokuhlala yidolophu ekuchithelwa kuyo iholide ehlotyeni, ene-jetty kunye ne-amp isikhephe kwi-headland, i-foreshore emangalisayo kunye neendawo zokugcina. Imiswe ngasemva ukusuka e-Esplanade kwinkundla engeyiyo yendlela, esi simo sinoxolo sibonelela ngembono kuyo yonke iHalf Moon Bay ukusuka kwibalcony ephezulu egobileyo, indawo yokuhlala evulekileyo kunye negumbi lokulala elikhulu.
Eli khaya licocekile, licocekile kwaye likhululekile lijolise emantla, kunye noqhagamshelo olungenamthungo ngaphandle. Umgangatho osezantsi kunye neendawo zokuhlala ezikumgangatho wokuqala zibonelela ngenkqubo yokufudumeza-ukupholisa kunye neendawo zokuhlala ezitofotofo ukuze iindwendwe ziphumle kwaye zibukele umabonakude, okanye ziphume ngokulula ngaphandle ukuya kwidesika apho iisetingi zangaphandle zibonelelwe khona. Ukuhamba yonke imihla ecaleni kwendlela yangaphambili kunye nonxweme oluqengqelekayo kuya kukwenza uphefumle umoya omtsha yonke imihla. Intabalala yeentaka kunye nolwandle oluhle lwesanti ye-Indent Head kunye ne-St Leonards zezakho ukuba uziphonononge kwaye uzonwabele.
Umgangatho ophantsi unamagumbi amabini okulala acocekileyo acocekileyo anemiwunduzo emikhulu, indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba kunye nesomisi, kunye negumbi lokuhlambela losapho. Umgangatho ophezulu yikhitshi yesicwangciso esivulekileyo esinesitayile esinezixhobo ezisemgangathweni kunye nebhentshi yesiqithi enezitulo zebha. Ngaphantsi kwesilingi enyukayo yecathedral, indawo yokuhlala yosapho kunye nendawo yokutya ivuleleke kwindawo entle. Iindawo zokuhlala phezulu nasezantsi zinezixhobo zokupholisa umoya, ezilungele iindwendwe ukuba zonwabele indawo yazo.
Igumbi lokulala elibanzi elinendawo yokulala ye-Queen linendawo yomgangatho we-2nd, nokufikelela ngokuthe ngqo kumgangatho, ukuhamba-ngeempahla, kunye ne-ensuite enesisa. Ukulala ukuya kutsho kwiindwendwe ezi-6, eli khaya liziswe ngokugqibeleleyo kwaye iibhedi zenziwe ngamashiti asemgangathweni wehotele kunye neetawuli zokuhlambela. Nceda iitawuli zaselwandle ze-BYO.
Ulungelelwaniso lwebhedi-iiNdawo zokulala 6:
Igumbi lokulala eliphambili 1: Ibhedi enkulu kunye ne-ensuite
Igumbi lokulala 2: Ibhedi enkulu
Igumbi lokulala 3: 2 x Iibhedi enye
I-Sorrento Terrace yindawo ebukekayo yolwandle, ukuhamba nje umzuzu nje ukusuka elunxwemeni, ukuhambisa imvakalelo yonxweme ekunceda ngoko nangoko ukuba uphumle kwaye wonwabele iholide yakho.
4.64 · Izimvo eziyi-28
Indawo yokuhlala, nceda uhloniphe abamelwane bethu ngokugcina amaqondo engxolo ephantsi, kwaye uhloniphe imithetho yengingqi kunye nemithetho yendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Ocean Edge Holiday Rentals: Rebecca
Izimvo eziyi-3 157
I-Ocean Edge Holiday Rentals ngokuzingca ilawula le propati kwaye iyafumaneka ngesicelo, ukuba iyafuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Indented Head